Ndozigharị nke Apostolic - WRSP
MGBE ỌZỌ NA-ECHICHE NA-ECHICHE
1906-1909: Revival Street Street, nke a na-ahụkarị dị ka ebe ọmụmụ nke Pentikọstal zuru ụwa ọnụ, na-ewere ọnọdụ na Los Angeles, California.
1947: Usoro Ọhụrụ nke Mmiri Ikpeazụ (Mmiri Ikpeazụ) kpatara esemokwu n'etiti Pentikọstal North America, gụnyere oku ya iji weghachi ụlọ ọrụ ndị amụma na ndịozi na chọọchị.
1960: Ọmụmụ nke neo-Pentikọstalism, nke a na-akpọkarị Charismatic Movement ma ọ bụ "ebili nke abụọ" nke North America Pentikọstal ije weghaara nkwenkwe na omume Pentikọstal n'ime ụka dị iche iche nke Ndị Kraịst wee bido ọtụtụ ndị minista na ụlọ ụka Pentikọstal nọọrọ onwe ha.
1980s: Ndị amụma Kansas City webatara ọfịs nke ndị amụma na ndịozi na neo-Pentikọstalism na mmalite nke "ebili mmiri nke atọ" nke mmaliteghachi Pentikọstal na North America.
1992: Ntughari Pentikọstal nke a maara dị ka Ngọzi Toronto malitere na Ubi Vineyard na Toronto, Canada na ọrụ mmeghari abalị nke dọtara ọtụtụ puku ndị njem si n'akụkụ ụwa niile.
1994: C. Peter Wagner nyere onye moniker na nkọwa nke "Ndozigharị Ọhụrụ Apostolic" kwuru iji dozigharịa Iso Christianityzọ Kraịst na mweghachi nke ọrụ ndị amụma na ndịozi dị ka a hụrụ na afọ ndị mbụ nke Iso Christianityzọ Kraịst.
1995: GOD-TV, netwọkụ telivishọn zuru ụwa ọnụ nke kwalitere nkuzi nke New Apostolic Reformation, guzobere, na-erute mba 200 a na-akọ ugbu a.
2011: Ndozigharị nke Apostolic New mere akụkọ na akwụkwọ akụkọ ụwa dịka ụfọdụ ndị na-azọ ọchịchị onye isi ala Republican jikọtara ya na mmegharị ahụ.
Ọ bụ ezie na C. Peter Wagner, [Foto na nri] lara ezumike nká Fuller Theological Seminary ezumike nká na onye isi ala nke Wagner Leadership Institute, ekwupụtawo na ọ bụ ntọala New Apostolic Reformation (NAR), enweghị ike ịsị na ọ bụ otu onye nhazi. Ọ bụ ihe ziri ezi ịchọpụta Wagner dịka onye ndú nke NAR ndị ghọtara na ọ pụta ìhè n'ime Iso Ụzọ Kraịst, ndị kwusara mmetụta ya dị ka nke dị ka nke Protestant Reformation. Wagner (2011) na-akọwa ọrụ ya na NAR dịka nke "nna ochie nnabata ọgụgụ" - dịka otu "onye nwere ike ịbụ onye mbụ na-ahụgharị usoro ahụ, nye ya aha, ma kọwaa àgwà ya dị ka m hụrụ ha. Mgbe nke a malitere ịbịakọta site na nyocha m na 1993, abụ m prọfesọ nke Ufọkabido Church na Fuller Theological Seminary, ebe m kụziri maka afọ 30. "
Na 1980s, Wagner malitere ịlele ngbanwe na Pentikọstal na ọ kpọrọ "okpukpu atọ," ngbanwe nke ga-etinye n'ime ya mkpụrụ nke NAR. A kọwakwara akụkọ ihe mere eme nke Pentikọstal Pentikọstal banyere ihe atọ ma ọ bụ "ebili mmiri." Ihe a sị na ọ bụ "ebili mbụ" malitere na nlọghachi nke mere na Street Azusa na Los Angeles n'oge 1906-1909, mmalite nke mere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme Nzuko Pentikọstal gụnyere mgbakọ nke Chineke, Chọọchị Chineke (Cleveland, Tennessee) na Chọọchị Chineke na Kraịst (Robeck 2006). Ndị ọbịa na Azusa Street na-ebu ozi Pentikọstal na ahụmahụ nke ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche, ngwọta anụ ahụ, amụma na ọrụ ebube dị iche iche na-eso "baptism na Mmụọ Nsọ" na North America dum.
Ọ bụ ezie na Pentikọstal na-ejikọta ọtụtụ ụka na nkwenkwe a na-akọwa na usoro nhazi n'oge mbido nke mbụ ahụ, nyocha nyocha nke ọma na-ekpughe ọtụtụ "pentecostalisms" n'ime òtù okpukpe dị ukwuu nke na-adị ka web-like na reticulate. Site n'ikwu okwu banyere ihe omumu nke okpukpe, ihe omuma ya abiawo ihe ndi ozo na akuko ohuru banyere onyinye ime mmioma na ememe. Akwa akụkọ ihe mere eme nke gbasaa site na North Battlefield, Sask. (Kanada) na United States na njedebe nke 1940s gosipụtara na ọ bụ ndị na-atụgharị uche nke na-ama aka ike ụlọ ọrụ ahụ n'ime Pentecostalism ihe dị ka afọ iri ise mgbe a mụsịrị ya n'okporo ámá Azusa.
Na-akụ mkpụrụ osisi maka mmụgharị ọhụrụ na ọgbọ nke abụọ nke Pentikọstal ije, Iwu Ọhụụ nke Mmiri Mmiri Ikpeazụ ahụ anabataghị nke ụka Pentecostalism. N'okwu ya ndị na-arụ ụka, ọ na-emesi ike n'ịgbalite ụlọ ọrụ na ọrụ nke ndị amụma na ndịozi, nke na-achọpụta nabatara na ngalaba nke nọnkọlọstal na-egosi na ọ bụ mmalite nke NAR. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị nkụzi nke Pentikọstal katọrọ nkuzi nke ikuku ozuzo, ụfọdụ n'ime ozizi ya metụrụ "okpukpu abụọ" dị ka nno-pentecostalism gbakwunyere n'ime ụka Protestant na Katọlik n'oge 1960 na 1970 (Poloma 1982). Site na etiti 1980s, okpukpu abụọ nke nweliteghachi nke Pentikọstal yiri ka ọ na-agba ọsọ ya na-ahapụ nanị nsonaazụ nke otu ọkpụkpụ ọrụ a, ma ọ bụghị tupu ịtọhapụ "ọhụụ atọ" nke ahụmahụ na ememe ndị na-adị na nnostaltistal.
N'okpuru ihu igwe nke radar nke abụọ nke na-ebute Pentikọstism n'ime Kraịst, isi mmalite dị na-eme. Otu ntorobịa a maara dịka "ndị mmadụ Jizọs" kpochapụrụ osimiri California ndị dị na 1970s na ahụmahụ ntanghachi nke ga-agbasa na North America (DiSabatino 1999). John Wimber, onye bụbu onye egwu rock tụgharịrị bụrụ onye ozi, ga-amụta site na mweghachi ahụ wee bụrụ otu n'ime ndị na-ekwuchitere ya. [Foto dị n'aka nri] Ọ kpọtara ndị ntorobịa hippie na-atọghata na Chuck Smith's Calvary Chapel ebe ọ nọ na ndị ọrụ (Miller 1997); ma mgbe ọ pụtara ìhè na hippie charismatics adịghị mma maka ọgbakọ Evangelical, Wimber kpọbatara ha na ụlọ ụka kwụụrụ onwe ya nke Ken Gulliksen hiwere dị ka Vineyard ma bụrụkwa ụkọchukwu. Omume Wimber na nzukọ ogbako na "ihe iriba ama na ọrụ ebube" dị iche iche ghọrọ nke a na-ewu ewu n'oge na-adịghị anya. Nkwenye na omume nke "ihe ịrịba ama na ihe ebube" karịrị nke mmadụ gosipụtara ihe bara uru maka uto ụka, na Wimber's Vineyard ga-abụ ọgbakọ ọhụrụ, Association of Vineyard Churches (Jackson 1999).
Site na ahụmịhe ọgbakọ na ngwụsị afọ ndị 1970, Wimber bịara nabata glossolalia dị ka ezigbo “onyinye mmụọ”, mana ọ nweghị mgbe ọ bụ ule nnwale maka inwe baptism na Mmụọ Nsọ dịka ọ dị n'ọtụtụ Pentikọstal akụkọ ihe mere eme. Kama inye “ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche” ọmarịcha ọnọdụ nkụzi nke ọ nwere n’ọgbakọ ụka Pentikọstal nke mbụ na nke abụọ, Wọba nke Wimber kwusiri ike banyere “ihe ịrịba ama na ọrụ ebube” ndị ọzọ, ọkachasị ọgwụgwọ na amụma Chineke. C. Peter Wagner bu ihe ama ama banyere uto uka na John Wimber n’ike nke “ihe iriba ama di iche iche” mere ha ka ha buru ndi di egwu dika ha webatara umu akwukwo ndi Seminarik nke Ful nke akwukwo Pasadena nke okpukpu ato. Wagner gosipụtara na ọ dị mma n'iwebata nkuzi nke atọ iji dọọ ndị ụkọchukwu na ndị ụkọchukwu, ebe Wimber duuru ọtụtụ ndị na-agba ọsọ nke abụọ na Pentikọstal nke atọ nke na-akwalite "ihe ịrịba ama na ihe ebube" nke ọhụụ n'ọgbọ ọhụrụ. N'ime oge 1980s Wimber ghọrọ onye na-achọ ọkà okwu neo-pentecostal na nzukọ na ụka dị na North America na United Kingdom (Wilkinson na Althouse 2014).
Ọ bụ n'etiti ndị na-ahụ maka ọkpụkpọ anụ ndị na-ahụ maka ọgbụgba ahụ na NAR si na ndò na-apụta ìhè na Wagner (2010) na-ekwusasi okwu ike na NAR "na-anọchite anya mgbanwe kachasị na-eme n'okpukpe kemgbe oge ndị Protestant Reformation." Ndozigharị nke Apostolic New ya abụghị echiche ọhụrụ. Wagner chepụtara mmalite ya na Òtù Na-ahụ Maka Nnwere Onwe nke Africa nke dị na 1900, Ụlọ Ọrụ Chọọchị Ndị China na-amalite na 1976, na nnwere onwe na-akwado chaa chaa nke 1960 na 1970. Ọ bụ ezie na Nsụgharị Ọhụrụ nke Apostolic na-akọwakarị banyere mweghachi nke ụlọ ọrụ nke onyeozi na dị ka Wagner kwụsịrị na chọọchị mbụ ma ugbu a na-eweghachite, na tiori na omume NAR mkpuchi dị ukwuu. Dị ka anyị ga-ahụ NAR gụnyere ndị a ma ama bụ ndị ndị ọzọ nwere ike na-ewere dịka ndị amụma mana ha onwe ha na-ezere NAR maka nkuzi ndịozi.
Dịka ọ bụla ọ bụla amorphous ije, karịsịa nke na-aga zuru ụwa ọnụ, na Wimber-Wagner akaụntụ abụghị nanị akụkọ nke akụkọ NAR. Dị ka ihe atụ, na Great Britain, dịka ọmụmaatụ, NAR mepụtara na ọnọdụ dị iche iche nke mmadụ, na-enwe ihe dị iche iche dị mkpa ma nwee mmetụta nke ihe dị iche iche mere eme (Kay 2007). C. Peter Wagner ka na-abụ isi ihe na American NAR, ma ọ dịghị ekwu na ya bụ onye guzobere otu ọganihu zuru ụwa ọnụ nke na "abụghị nzukọ" na nke "ọ dịghị onye nwere ike ịbanye ma ọ bụ buru otu kaadị." Ọ na-ekwu naanị ịbụ onye kọwara mmalite na mmepe nke netwọk nke ụka dị iche iche na ndị ọrụ onwe ha n'ụwa dum na-ekerịta ọhụụ iji mee ka ngbanwe nke Mmụọ Nsọ.
A na-ekpo ọkụ ọkụ nke NAR na 1990s na n'ime puku afọ ọhụrụ ka a na-emepụta netwọk ọhụrụ na ndị agadi ka Pentikọstism ahụ dịghachi ndụ. Otu ihe omume dị ịrịba ama mere na Toronto Airport Vineyard na Jenụwarị 1994 na akwụkwọ akụkọ dị na Great Britain kpọrọ "Ngọzi Toronto." Nleghachi nke abalị mere na obere ụka dị n'akụkụ ọdụ ụgbọelu Toronto nke mere ka ọtụtụ puku ndị ọbịa si gburugburu ụwa ya Ọnọdụ Toronto maka ihe karịrị afọ iri na abụọ. [Foto dị n'aka nri] "Ihe ịrịba ama na ihe ebube" abụghị naanị akụkụ nke ọrụ abalị ọ bụla, mana mmaliteghachi na ahụmịhe paranormal ya gbasara gafere mgbidi ụka n'ime ụlọ nri, ụlọ oriri na ọ andụ localụ na ebe a na-adọba ụgbọala (na site na Toronto na North America na gburugburu ụwa) ). Ndị ozi, ndị amụma na ndị na-eso ụzọ ha tụgharịrị na mbido ahụ dịka ndị njem ala nsọ Pentikọstal si n'ọtụtụ mba ofesi n'abalị ọ bụla. Ngọzi Toronto bụ mmaliteghachi nke na-abụghị naanị ebe a hụrụ ya, kama ọ bụ nke ebugara n'ọtụtụ ụlọ ụka ụlọ nwere saịtị maka oge gbasara ụwa (Poloma 2003).
N'iburu ọtụtụ netwọk nke ụka na minista dị iche iche gburugburu ụwa na-egosi ma ọ bụ ndị ejiri NAR mara, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na nkwenkwe ya na nkuzi ya abụghị otu. Ndị na-ekwu okwu na ndị na-ekiri ihe na-ekwu na NAR ziri ezi na Pentikọstal na-abịakwute Kraịst. Dika uzo Azusa Street Revival nke otutu ndi mmadu kwuru na ha nwere Pentikostaliism nke ndi America ma obu ndi ngota nke Toronto nke mere ka ha nweghachi ya, enwere ike ịkọwa NAR dị ka Pentikọstal na steroid. Ihe ọ bụla ọ bụ, NAR gụnyere ahụmịhe okpukpe Ndị Kraịst e weere na ọ bụ Akwụkwọ Nsọ karịa ozizi ọhụrụ, ahụmịhe okpukpe nke na-adị mfe ịkọwa akụkọ banyere ụbọchị gara aga. Pentikọstal nke North America na-achọkarị echiche ụwa nke ọzọ nke na-akwalite mmetụta okpukpe (Poloma 1995). Site na ọgbọ ndị na-esote ya na ka ndị Pentikọst gbagoro n'ọkwá ọha na eze, a naghị etinye ike na ike mmụọ nsọ na onyinye nke amụma, ọgwụgwọ, ọrụ ebube, glossolalia na ahụmịhe ime mmụọ ndị ọzọ na-adabaghị adaba na nkuzi Evangelicalism na nkuzi ziri ezi (Poloma) 1989). NAR, yana njikọ zuru ụwa ọnụ zuru ụwa ọnụ, enwere ike ile anya dị ka mmegharị iji weghachite echiche ụwa Pentikọstism ọzọ na-elekwasị anya na ike karịrị nke mmadụ. Site na ime ka ikike nke “ihe iriba ama na ebube” nke ime mmụọ na-akụzi na ndị kwere ekwe nwere ikike nke Mmụọ Nsọ ịgbanwe ụwa.
Mgbe ụfọdụ, m na-agwa ndị ndú ndị ga-apụta ịkọwa ụwa ya ma hà chere na ha bụ akụkụ nke NAR. Nzaghachi a na-azakarị, "Ọ dabere na ihe NAR na-ekwu." Akwụkwọ, nkọwa na okwuchukwu jupụtara na nkwenkwe na omume NAR, mana netwọk ya ndị na-enweghị ihe ọ ga-abụ na ọ gaghị emepụta nkwupụta nke okwukwe dịka a na-ahụ na òtù ndị guzobere . Ndị isi America bụ ndị na-amata NAR ga-ekweta na ha na-ekerịta nkwenkwe nke ndị Kraịst Evangelical na-achọghị nchebe dịka agbanyeworo na Bible. Dị ka C. Peter Wagner (2011) si kwuo, "Anyị na-agbaso ihe ndị bụ isi nke Ndozigharị ahụ: ikikere nke Akwụkwọ Nsọ, ikpe ziri ezi site n'okwukwe, na ọrụ nke ndị niile kwere ekwe. Ma ọdịdị nke ndụ ụka, ọchịchị nke ụka, ofufe, nkà mmụta okpukpe nke ekpere, ihe mgbaru ọsọ nke ozi, nchekwube anya maka ọdịnihu, na akụkụ ndị ọzọ bụ nnọọ mgbanwe site n'okpukpe Protestant. "
Inweta Chineke n'ime ndụ kwa ụbọchị na-akọwa NAR karịa ndepụta edepụtara nke ọma. Wagner (1997: xx) na - achikota ihe omimi nke ato na nke NAR dika ihe ndia: "ochicho nke ndi n'olu nke ato bu inwe ike nke Mo Nso n'igwo ndi oria, ichupu ndi mo ojo, inweta amuma, ma na-ekere òkè na ihe ngosi ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ n'emeghị ka nkà ihe ọmụma dị ugbu a na-achịkwa ọgbakọ ndị a. "Nzukọ dị iche iche na-esi enweta ma jiri onyinye ime mmụọ ndị a na ndị ndú na-ede akwụkwọ ndị jupụtara na tebụl n'azụ ụlọ mgbakọ na ụlọ akwụkwọ nchịkọta ụka. Ndị isi, gụnyere Wagner, na-ekwusi ike na nghọta NAR chọrọ ka ngbanwe nke ihe na-agụnye ụwa nke na-ekwupụta ụzọ dị iche iche nke ịmara, nke ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu na akụkụ nke ememe.
Ozugbo Wagner kwetara na ya nwere obi abụọ, Wagner (1997: xxi) kwupụtara na Bill Hamon, onye guzobere Christian International na netwọkụ ya na ụwa niile, maka iwete ya site na "mgbanwe mgbanwe" gaa n'okirikiri nke atọ na NAR. Wagner kwuru na ya "si n'okpukpe Ndị Kraịst mgbe ochie pụọ gaa n'ihu ọha na-emeghe ma na-eje ozi nke Mmụọ Nsọ" n'akụkụ ya site na ịgụ akwụkwọ Hamon Amụma na Amụma nke Onwe (1987) na Ndịozi, Ndị Amụma na Ọbịbịa Na-abịanụ nke Chineke (1997). Ọrụ Hamon abụghị naanị Wagner metụtara, mana enwere ike ịgụta ha dị ka ntọala maka iyi nke nkà mmụta okpukpe populist nke ndị amụma na ndịozi NAR bipụtara ma kwusaa. “Mgbanwe” mbụ e zoro aka na moniker ahụ bụ "Ndozigharị Ọhụrụ Ndịozi" bidoro ihe dịka afọ 500 na Ndozigharị Protestant nke metụtara Europe. Ọtụtụ n’ime ihe ụmụazụ ya nke oge a na-achọ ime ka “nke ọhụrụ” bụ mweghachi nke ministri na ọfịs ndị nwere okpukpu ise dị n’akwụkwọ Ndị Efesọs (Ndị Efesọs 4: 11-13), ndị minista nke ndị ozuzu aturu, ndị nkuzi, ndị nkwusa ozioma, ndị ozi na ndị amụma. Ọ bụ ezie na ekwuru na ejirila nke nta nke nta weghachite ministri atọ mbụ mgbe mgbanwe ndị Protestant gasịrị, ndị amụma na ndịozi ka a na-eweghachi ugbu a na mkpa mbụ ha. Dị ka Hamon si kwuo, mịnịstrị dị okpukpu ise bụ ihe efu karịa “mgbatịkwu nke ịbụ isi nke Kraịst na Chọọchị”
A na-ekwenye na ọfịs ndị ozi na-abụ onye ikpe-azu ma kwenye na ọ bụ arụmụka kachasị dị iche iche nke usoro ọrụ ise a ga-eweghachi. Dị ka Wagner na ụfọdụ ndị isi NAR si kwuo, ọ bụ ihe kachasị mkpa. A na-ebo ndịozi ụgwọ ọrụ nke "ntọala ntọala," na-enye isi nkuku maka ụlọ ọrụ na ọrụ ndị ọzọ. Ọrụ nke onyeozi na-agụnye "ịmepụta ụka ọhụrụ, imezi ihe na-ezighị ezi, ịkwado usoro na ịhazi nke kwesịrị ekwesị, na ịrụ ọrụ nlekọta nke ndị nlekọta nna ọzọ" (Hamon (1997: 279). dịka ihe gbasara netwọk NAR nke ka ukwuu. N'ịbụ ndị dị iche iche na nkwupụta ma na-ejupụta na omume, ndịozi na ndị amụma NAR maara nke ọma na-ejikọta ibe ha iji nyere ndị ndú aka n'ime ma n'etiti netwọk dị iche iche.
Mkparịta ụka na-adịghị mma bụ ozi ndị amụma. Amụma na amụma ebuwo òkè dị ịrịba ama na okpukpe dị iche iche n'akụkọ ihe mere eme nke mmadụ, gụnyere ndị Juu, Chọọchị Ndị Kraịst oge mbụ, nakwa n'ọtụtụ okpukpe Protestant. Robeck (2002: 1007) na-ekwu na "ụka ahụ [na narị afọ ndị gara aga AD] abụghị onye ọhụụ ịnọgide na-arụ ọrụ amụma" nakwa na "e mere ụlọ n'ime ụlọ chọọchị maka ndị amụma na-arụ ọrụ na mpaghara na mpaghara." , ebe ọrụ amụma na-adị na Chọọchị Iso Ụzọ Kraịst na-esochi ya, a kpachaala ya anya, na-eme ka ọ dịwanye njọ ma na-ejikarị mmụọ ọjọọ eme ihe. Omenala ole na ole enwere ike ịkwado amụma amụma ndị a na-egosi na Chineke na-agwa ụmụ mmadụ okwu. Ihe ọ bụla ọ bụ, akụkọ ihe mere eme na-atụ aro na amụma ahụ pụrụ ịdị ize ndụ nye ụlọ okpukpe okpukpe dị (Poloma na Lee 2013a; 2013b).
O doro anya na e nwere ọdịiche dị iche na nghọta na omume nke oge a nke amụma nke nwere ike jikọta ya na nghọta na omume nke onyinye ime mmụọ site na NAR. A nabatara amụma dị ka ngalaba nke ndị amụma nwere amara ma mara amara nke na-ebi ndụ ihe NAR ga-ebu ọrụ amụma. Nye otutu ndi Pentikọst, ka osi di, amuma amutawo kwa dika onyinye nke diri ndi Kraist nile juputara na Mo Nso dika ha kwenyere na obu na chochi mbu. Otú ọ dị, e nwere ọdịiche dị n'ihe Chineke pụrụ ịgwa ìgwè mmadụ na ndị amụma a ma ama okwu. Ọ bụ ezie na mmadụ niile nwere ike itinye aka na “nkwupụta” ma ọ bụ ịnụ ihe sitere n'aka Chineke, ọfịs na ozi amụma ahụ gụnyekwara 'ibu amụma' banyere ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu. Dị ka a ga-atụle n'isiokwu na-esote banyere nsogbu na nsogbu (na-atụle John Wimber ịhapụ onwe ya na netwọkụ a maara dị ka Kansas City Amụma na ngwụsị 1980), o yikarịghị ka Wimber gaara eso C. Peter Wager na NAR guzoro na mweghachi nke ọrụ nke onye-amụma.
Na nchikota, enwere ike ikwu na amụma dị ka a ghọtara na netwọk NAR gụnyere amụma maọbụ ịkọwa ihe ga-eme n'ọdịnihu. Ọdịdị nke amụma a ka ọ ga-abụ nke ndị dị ole na ole na-eme ka ndị na-eso ụzọ ya mara nke a họpụtara ka ha bụrụ "ọrụ nke onye amụma." Amụma nke ọtụtụ ndị Pentikọst na Neo-Pentikọst na-eme (na mgbe NAR kụziri ya ndị amụma na ndị nọ na pews), Otú ọ dị, o yikarịrị ka hà ga-ewere ụdị nkwupụta kama ikwu okwu. A na-ewere ya dịka onyinye nke amara Chineke dị (ma ọ dịkarịa ala n'ọnọdụ ụfọdụ) nye ndị niile kwere ekwe, na-enyere ha aka ikwu okwu ma ọ bụ mee ozi ndị kweere na sitere n'aka Chineke nke na-ewuli elu, na-agba ume ma na-agọzi ndị ọzọ.
Ihe jikọrọ ozizi nke ise na ụlọ ọrụ nke onyeozi, onye amụma, onye pastọ, onye na-ezisa ozi ọma, na onye nkụzi dịka ozizi NAR a ma ama bụ nkwenye na-ekwenye ekwenye na "ọchịchị." Ụfọdụ ndị ndú NAR na-adụ ndị kwere ekwe ọdụ ka ha "chịkwaa" ụwa ụwa ma gbanwee ya n'ime Alaeze Chineke site na iji onyinye ime mmụọ ha. Ma ọ bụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, azụmahịa na ego, agụmakwụkwọ, nlekọta ma ọ bụ nkà, ozi bụ ịdabere na Mmụọ Nsọ iji duzie ma nye ndị na-eso ụzọ ike ka ha weta mpempe eluigwe n'ime ọrụ ha kwa ụbọchị. Okwesiri ka edeba ama na ihe ekwusiri ike bu ime ka ndi mmadu ghara ime ihe dika ndi ochichi, obu ezie na ha nwere ike itinye aka na akwukwo. Wagner (2011) na-akọwa "ọchịchị" dị ka ndị a:
Nke a na-ezo aka n’ọchịchọ nke mụ na ụfọdụ ndị-enyi m nwere isoro Jisus na ime ihe Ọ chọrọ. Otu ihe O choro O kuziri anyi ka anyi kpee n’ekpere nke Onye-nwe-anyi: ‘Ka alaeze Gi bia, ka eme uche Gi n’uwa dika esi eme ya n’elu igwe. Nke a pụtara na anyị na-eme ike anyị niile iji hụ na ihe anyị maara bụ njirimara nke eluigwe na-arụ ọrụ n'ime akwa na ajị anụ nke ọha mmadụ ebe a n'ụwa.
N'akwụkwọ ya Mgbe Eluigwe Na-abata n'Ụwa Bill Johnson, onye guzobere Ụlọ Nzukọ Alaeze na Redding, California, na-enye nkwurịta okwu nwere ike ikwu na ntuziaka bara uru maka ọchịchị. Ọ na-ewebata nkwenye dị ka ndị a (2003: 32): "A mụrụ anyị ịchị achị-ịchịkwa okike, n'elu ọchịchịrị-ịkwakọrọ ọchịchịrị ma mee ka ọchịchị Jizọs bụrụ ebe ọ bụla anyị na-aga site n'ikwusa ozioma nke Alaeze ahụ. Alaeze putara ala eze. Na nzube mbụ nke Chineke, ihe a kpọrọ mmadụ na-achịkwa ihe e kere eke. Ugbua na mmehie abatala n'ụwa, ọchịchịrị na-akpata ọrịa, ya bụ: ọrịa, ọrịa, mmerụ mmụọ, ịda ogbenye, ọdachi ndị na-emere onwe ha, mmụọ ọjọọ, na ihe ndị ọzọ. . . . Mwakpo nke Chineke n'ime ọnọdụ a na-agaghị ekwe omume ga-abịa site n'aka ndị mmadụ natara ike si n'elu ma mụta ịhapụ ya n'ime ọnọdụ nke ndụ. "
Na nchikota, na ochichi nke ndi Apostol na n'usoro, ndi ndu ndu nke NAR kwere na o kwere omume ime ka ala eze Chineke site n'inye ike Chineke n'ihe ha na-akpọ "ugwu ugwu asaa" (agụmakwụkwọ, ọchịchị, mgbasa ozi, nkà na ntụrụndụ, okpukpe na ezinụlọ). [Foto dị n'aka nri] "Ugwu asaa nke ọdịbendị" sitere na ọhụụ nke Onye Ntorobịa na Onye Nwee Mgbasa Ozi Loren Cunningham ma kwenye na onye edemede ozioma Francis Schaefer na onye nkwusa ozioma Bill Bright na 1975. N'ịbụ nke a kọwara dịka ngwá ọrụ nke ozi ọma, "ụzọ ga-esi abịakwute ndị mmadụ maka Chineke," ụfọdụ ndịozi na ndị isi NAR kwadoro ma gbanwee ya n'ọgụ ha na-agba iji mee ka eluigwe bịa n'ụwa.
Wagner na-enye nkọwa zuru oke na nkọwa nke NAR nke na-enye ohere ka ọtụtụ nchịkọta nnoo-pentecostalism nke atọ chọpụta na ọ dịkarịa ala akụkụ ụfọdụ nke NAR. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ndú nke mmiri mbụ na nke abụọ kụziri na "Pentikọst ọhụrụ" bụ ihe ịrịba ama nke End-Times, ọyọsọ nke atọ ka a na-elekwasị anya iji mee ka eluigwe bịa n'ụwa. Ndị ikom (na ụfọdụ ndị inyom) bụ ndị a maara dịka "ndị ozi" na "ndị amụma" na-eme ka okwukwe nke ndị na-eso ụzọ rụọ ọrụ ọ bụghị nanị ịgbanwe chọọchị ma gbanwee ọha mmadụ ka ha na-ebi ma na-arụ ọrụ. N'ime usoro nke a bụ ihe Bill Johnson na-akpọ "obi gbanwere." A gwara ndị kwere ekwe ka ha kwenye na ọ gaghị ekwe omume ka ha na-arụ ọrụ iwebata n'alaeze Chineke. "Ana m abịa ịhụ," ka Johnson (2005: 31) na-ekwu, "na ndụ Ndị Kraịst dị ndụ pụtara ọrụ ebube, enyemaka dị ebube, na mkpughe."
Omume di iche iche na ihe omuma ndi ha kpoghariri nwere ike ijide uto nke Pentikostalism nke uwa na ndi nsonyere 600 nde ya (Albrecht 1999). Ọ bụrụ na Ndozigharị Protestant (1517-1648) gbasara ozizi, Ndozigharị Ọhụrụ Apostolic gbasara ike nke ahụmahụ Pentikọstal iji nye ike ndụ na obodo gbanwere. Ahụmahụ ndị a nwere ike ime n'oge ekpere onwe onye yana mgbakọ buru ibu, ma ha yiri ka ha nwere àgwà pụrụ iche n'oge ọrụ obodo. Na ụka NAR ọ bụla ofufe ofufe nwere ike izute Chineke n'otu na n'onwe.
Otú ọ dị, NAR ga-agbagha iji okwu ahụ bụ "ememe" iji kọwaa omume obodo ya, na-ahọrọ kama ịkọwa ha dị ka "ofufe." Ndị Pentikọst, gụnyere NAR, ejiriwo ememe tụnyere "usoro iwu kwadoro, usoro iwu na-akwadoghị nke mmụọ nke ụka ụka" (Lindhardt, 2011, 2). "Ofufe," n'aka nke ọzọ, "kwekọrọ n'otu usoro ememme a kapịrị ọnụ nke ndị sonyere na-egosipụta nrara nye Chineke ma na-ahụ ịdị adị nke Chineke na ọnọdụ nke obodo" (Ingalls 2015: 4). Ma enwere otutu ihe eji eme ya na ofufe NAR. O na-ebido n’udi mmadu site n’itinye otutu oge n’abụ otu egwu duziri ya na okwu nke onye ozi ya na “inye onyinye” nke onyinye nke Mo, ọkachasị amụma na ekpere ọgwụgwọ. Ma obu ubochi Sọnde ma obu nnukwu ogbako, ndi kwere ekwe nele anya inata ihu Chineke.
NAR enweghị akwụkwọ nke usoro ofufe akwadoro, mana ọrụ ụbọchị ụka n'ozuzu ya nwere ihe atọ: egwu dị egwu na abụ, okwuchukwu, na ịmalite onyinye mmụọ. Ofufe (okwu nke nwere ike ịgụnye usoro atọ a niile) na-emepekarị oge nke ọgbakọ na-abụ abụ nke egwu oge a nke otu ndị agha na-eduzi. Okwu abụ a n'ozuzu ya bụ ekpere nye Chineke ma ọ bụ okwu ozi Chineke zigara ndị na-efe ofufe kama ịbụ abụ banyere Chineke. Otu onye n’ile anya nke oma gha achoputa na mgbe mgbe, enwere isi okwu nke n’egosiputa egwu ofufe nke oge a, dika ukwe ihe banyere ihunanya Chineke ma obu onodu ya, kelee Chineke maka ndokwa ma obu nzoputa ya, ikpe ekpere maka Mo Nso na nwughari. A na-enye okwu na ihuenyo dị n'azụ ahụ egwu ọhụrụ na-abụkarị ọhụụ na ndị toro eto kwụsịrị na akụkọ ihe mere eme. Otú ọ dị, ofufe ekwesịghị ịbụ nke e mere ka ihe nkiri nke Ndị Kraịst nke na-eme ndị na-ege ntị obi ụtọ; a na-agba ndị niile na-aga ọgbakọ ume ka ha sonye n'ụzọ ndị dị mma (abụ, iti mkpu, ịgba egwu, welite aka, ịkụ aka, ma ọ bụ ịnọdụ jụụ). Ruo ihe dị ka nkeji iri atọ ma ọ bụ karịa na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ ọgbakọ na-abụ ma na-achọ ịghọta ọnụnọ Chineke n'ụzọ dị nro.
Ekwenyere na Chineke bi na otuto nke ndị Ya, na ifekọ ofufe ọnụ na-ewepụta ọnụnọ dị adị. Ofufe site n’egwú bu ihe anahu anya bu ihe omume omen’ala nke putara ihe ma obu na nnukwu nzuko, ma obu obodo pere aka. N'ọgbakọ ụfọdụ oge ofufe site na egwu na-eduga n'ememe udo ọnụ na-eme ka ịdị n'otu nke ọtụtụ ndị nwere ike ịnwe site na abụ pụta. A na-enye okwu amụma banyere ọnọdụ ahụike na nke mmụọ dị iche iche nke Chineke kwuru na ọ chọrọ ịgwọ na obodo, ma na-agba ndị ọgbakọ ume ka ha kpee ekpere n'okwu nke aka ha maka mkpa onye dị ha nso. Na ọrụ ndị ọzọ ofufe egwu nwere ike inye ohere maka ọkwa na mmemme ncheta, ndị ọgbakọ na-ekele ibe ha yana "onyinye" ma ọ bụ nnakọta. A na-echetara ndị ọgbakọ site n'oge ruo n'oge na nchịkọta a bụkwa akụkụ dị mkpa nke ife Chineke ofufe. Okwu nke dabeere na Baibul nke onye ozi ma ọ bụ onye nkwusa ọbịa na-ekwu na-eru ihe dị ka nkeji iri atọ na iri anọ gụnyere akụkụ ikpeazụ nke ọrụ, nke nwere ike ibute ịmalite onyinye ime mmụọ, ọkachasị amụma na ọgwụgwọ. Ohere iji “nye” ma ọ bụ “rụọ ọrụ” onyinye ime mmụọ nwere ike ime tupu okwuchukwu (dị ka e gosipụtara site na emume udo a na-emekọ ọnụ) ma ọ bụ enwere ike iji okwuchukwu ahụ bido ịmalite onyinye nke mmụọ na ikpe ekpere maka ibe. Otutu ulo uka ndi NAR azuru ndi otu ekpere ndi guru akwukwo maka ime ka onyinye nke Mo na ndi nwere onyinye n'ekpere maka ndi uka.
N'ụzọ ụfọdụ, ememe a dị mfe nke a na-edeghị aha, nke dị ihe dị ka nkeji iri itoolu, yiri nke ọtụtụ ụka dị iche iche nke ụka dị iche iche dịka ihe a na-emeghị ka ememe Pentikọstal kwụsịrị n'ime ụka Protestant. Ihe dị iche na-atụ anya na Chineke nwere ike "igosi" n'ụzọ ndị dị egwu, gụnyere amụma, ọgwụgwọ na (n'oge ụfọdụ) flakes ọlaedo, igwe ojii na-egbuke egbuke, na ụdị ndị ọzọ a na-ahụ anya nke ndị Protestant na-ekwusa ozi ọma. Ịmụta otú e si efe ofufe ma na-arụ ọrụ onyinye mmụọ (iji kpee ekpere na-agwọ ọrịa, amụma na onyinye ndị ọzọ) na-egosipụta ya na ọrụ ọgbakọ ọ bụla ma gosipụtara na nzukọ ndị agbarịtara agbago nke a na-eme na mba niile na chọọchị dị iche iche, hotels, schools of ụlọ ọrụ na-eme njem na-enyefe ebe ndị kwere ekwe ga-enweta ngọzi na ohere ịmụta ụzọ isi na-ejere ha ozi. Nzukọ, jupụta na ulo nlọkọ maka ịkụzi na ịzụ ụgbọ, na-enye ohere iji nweta oge iji kwado onyinye, na-ejere ndị ọzọ ozi na ka a na-ejere ya ozi, karịa ka a na-ahazi ụbọchị Sunday.
Otú ọ dị, ọgbakọ ndị NAR adịghị enwe afọ ojuju n'ịkwụsị ahụmahụ ha banyere ọrụ ndị Chineke na-arụ n'ụbọchị Sunday. Mgbe a na-eje ozi site n'okwu amụma na ngwọta Chineke na ọrụ ụka, nzukọ na klas, a na-agba ha ume iji onyinye onyinye mmụọ ha gaa n'ọma ahịa nke ndụ ha kwa ụbọchị. (Ọtụtụ n'ime netwọk Revival Alliance nke isii a kọwara na ngalaba na-esote na netwọk nhazi nwere ịkụziri ụmụ akwụkwọ ọzụzụ na ozi ndị ọzọ ka ndị na-eso ụzọ na-amụtakwu banyere "ihe ịrịba ama na ihe ebube" na imegharị onyinye.) Ịgba akwụna na-agabiga mgbidi chọọchị. Otu ọgbakọ nwere ike ịtọ ụlọ nke amụma n'ụlọ ezi oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ ụlọ ekpere na-eme ememe obodo iji jeere onyinye nke mmụọ nsọ. Ndị na-ese ihe amụma nwere ike ịbịaru talent ha gaa na ebe obibi ebe ha na-egosipụta ozi amụma site na nka. Ndị na-eto eto nwere ike ịga n'ìgwè mgbe ha kpesịrị ekpere ka ha kwusaa ozi ọma site na "ịchụ nta akụ." N'akwụkwọ ọ na-agụkarị banyere isiokwu bụ Kevin Dedmon (2007: 18) dere, sị: " Ego kachasị mma bụ maka ịkwado, inye ike, na ime ka onye kwere ekwe nwee ike ịdị ndụ n'ụzọ nkịtị nke nkwusa ozi ọma karịrị nke mmadụ. Ebumnuche bụ iji mee ka ndị mmadụ nwee obi ike na ikike, nke mere na onye ọ bụla kwere ekwe nwere ike ibu ọrụ nke ịbụ onye àmà Jizọs nyere n'iwu. "
Ememe ofufe NAR bụ ememe ndị a na-eme, karịsịa n'oge ememeghachi ma ọ bụ nzukọ ọgbakọ nke oge ọnụnọ Chineke na-aghọwanye ihe na-adọrọ adọrọ. Ofufe na-eme ka ọ bụrụ ihe dị egwu ma na-eme egwuregwu ka ndị na-eto eto na-abụ abụ, na-egwu egwu, na-awụlikwa elu, na-akụ, na ọkọlọtọ na ịgba egwú (a na-ekwukarị na "Chineke na-atụ egwu"). Ịda n'ala, nchịkwa ndị a na-achịkwaghị achịkwa, na-asụ asụsụ dị iche iche (glossolalia), na-eme ihe ike nke isi na aka, omume nke tunnels, na ndị ọzọ na-azaghachi omume ka a ga-ahụ n'oge ogbako mmemme karịa ọrụ niile. Mgbagha nke okpukpu atọ abụrụla isiokwu nke mkpesa site na mkpụrụ nke abụọ ebili mmiri nke Pentikọstal nakwa site na ndị na-akụzi Akwụkwọ Nsọ nke Akwụkwọ Nsọ. Ndị nkwụsị ụka na-ekwu na ọrụ ebube ndị dị na Akwụkwọ Nsọ jedebere na akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị edere ederede. Ebum n'uche nke Chineke, amụma na ọrụ ebube bụ nanị iji bulie chọọchị ahụ na narị afọ mbụ ma a pụghị ịchọta ya na ụka nke oge a.
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na ụdị nduzi dị iche iche na usoro ụwa niile a maara dị ka Ndozigharị Ozi Ọhụrụ nke agaghị ekwe omume ijide na otu ndebiri. Ndi nde mmadu Yoido Full Gospel Church hiwere na Seoul, South Korea site n’aka onye isi ochichi bu David Yonggi Cho ya na ndi mmadu ise na 1958 ma ugbua ndi Dr. Lee Young-Hoon kwadoro ya, achoputala ya na NAR. Otú a ka ụkọchukwu Enoch Adejare Adeboye si The Redeemed Christian Church of God dị na Nigeria nke nwere puku 5,000,000 nwere ngalaba 14,000, gụnyere ngalaba Britain na United States. Ha abụọ kerịta echiche ụwa Pentikọstal nke na-emesi ike nke ike karịrị ike na nke ndịozi, mana ọbụghị ụka ndị a gosipụtara enyo NAR onye ndu na nzukọ dịka achọtara na mmegharị mmegharị pere mpe na North America. Dị ka Wagner (2011) si chọọ banyere akara ngosi NAR, “Ọ na-atọ m ụtọ na ndepụta nke ndị mgbasa ozi jikọtara na NAR. Ekwenyesiri m ike na ụfọdụ n'ime ha agaghị amata okwu ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, agbanyeghị, ha ga-dabaa na NAR template, mana ebe ọ bụ na NAR enweghị aha ndị otu, ha onwe ha ga-ekwupụta ma ha weere na ha nwere mmekọ ma ọ bụ na ha abụghị.
Ndị isi NAR na-ekwu na ike karịrị nke mmadụ dị ka ha gbanwee ụzọ a na-eme ụka na ihe ha kwenyere na ọha na-adị n'ọchịchị. NAR abughi nzuko obula, o nwebeghi nzuko obula nke nwere ikike idenye aha ya, ikwuputa nkwenye ya, ma obu ndi isi ulo uka, ulo uka ma obu ministri. Geivett and Pivec (2014: 3) ewepụtala ụfọdụ ndepụta nke ụlọ ụka NAR na ụlọ ọrụ ndị dị na North America, ndepụta nke ndị isi NAR bụ ndị 'guzobere ọtụtụ òtù wee mepụta mmekọrịta dị n'etiti onwe ha). " Otu n'ime ndepụta gụnyere ihe karịrị iri isii aha ndị ozi na otu ha; onye-isi ufodu ndi-okenye nke ndi-amuma na ndi-ha. Otu netwọkụ ọzọ, nke a ga-eji mee ihe atụ na nkebi a, nwere netwọkụ isii nwere onwe nọ n'okpuru nnukwu netwọọ anwụrụ ọrụ a na-akpọ Revival Alliance (Geivett na Pivec: 212-17). Okwesiri iburu n’obi na ndi ndu ndu nile nke Revival Alliance na ije ozi ha ka ndi Reving Blessing gha metutara.
Ihe ọzọ kwesịrị ịrịba ama bụ na ọ bụ ezie na ndị isi NAR nwere ike iwere onwe ha dị ka ndịozi na ndị amụma nwere nkà, ndị isi na Revival Alliance nọ na aha mbụ ha na ndị na-eso ụzọ ha. O yikarịrị ka ha agaghị eji utu aha mee ihe, na-ahọrọ ịghara ịkọwa onwe ha ma ọ bụ na-ezo aka na ibe ha site na iji nomenclature nke "onyeozi" ma ọ bụ "onye amụma" dị ka a na-emekarị na ụfọdụ netwọkụ. (N'ezie Heidi Baker, onye nwere Ph.D. na usoro mmụta okpukpe nke usoro nke College College na London, ahụla ka ọ na-ajụ ọrụ nke onyeozi site na akụkọ onwe onye naanị ya nwere ike.) Ọ dịkwa mkpa na ndị otu Revival Alliance na-ewepụta ozi ha dịka mbọ di na nwunye na-agba mbọ, agbanyeghị n'ọtụtụ ọnọdụ ọ bụ di bụ onye bidoro ozi ahụ dị ka onye ụkọchukwu nke ọgbakọ. Ndi Revival Alliance tinyere di na nwunye ndia: Bill na Beni Johnson's Church Church na Redding, California; John na Carol Arnott jidere Fire Ministries na Ontario, Canada; Randak na DeAnne Clark si Global edemede ke Mechanicsburg, PA; Ememe Global Georgian na Winnie Banov na Valrico, Florida; Che na Sue Ahn's HRock na Pasadena, California; na Rolland na Heidi Baker's Iris Global, tinyere ụlọ ọrụ US na Redding, California. Ilekwasị anya na Revival Alliance na-enye otu ihe atụ nke nnukwu netwọkụ nke pụtaworo site na obere netwọkụ ka ya na ndị isi ndị ọzọ na-akpakọrịta, na-akwado ma na-ebupụta netwọkụ ndị ọzọ, iji kwalite mmezi mmụọ nke Pentikọstal.
Ihe nketa nke ụwa bụ netwọkụ nke ụka dị gburugburu Bill na Beni Johnson's Betel Church dị na Redding, California, netwọkụ ebidoro netwọkụ ndị ọzọ, gụnyere Cal Pierce's Healing Room Ministri ((lọ Ọrụ Na-ahụ Maka alinglọ Ọgwụ weebụsaịtị 2016) na nso nso a Jesus Culture na Sacramento (Liebscher) 2009; Ebe nrụọrụ weebụ Jesus Culture 2016). Ebe nrụọrụ weebụ Global Legacy kwadoro Paul na Sue Manwaring na ntọala Global Legacy, ma ọ bụ Bill na Beni Johnson na-anọchite anya Global Legacy na Revival Alliance (Global Legacy website 2016). Akwụkwọ akụkọ Global Legacy na-akọwa netwọkụ ya dị ka nke dị “ijikọ ma gbaa ndị na-eme mgbaasị ume ebe ọ bụla n’ụdị ọrụ ha ọ bụla iji hụ ka Alaeze Chineke na-aga n’ihu.” Ọ bụ ozi nke hiwere isi n’isiokwu edepụtara na akwụkwọ Bill Johnson na nzukọ ya: “Site na mmekọrịta anyị na ndị ọzọ nwere mmasi maka iweta eluigwe n’elu ụwa, anyị na-achọ ka ndị isi akụ na ụka, ministrị, otu dị iche iche, ngalaba nke mmetụta na mpaghara ala iji hụ mgbanwe na ahụmahụ zuru ụwa ọnụ revival ”(Global Legacy website 2016). Betel Redding's School of Supernatural Ministries (Betel nke Redding School nke Supernatural Minista webụsaịtị 2013) ya na “ụmụ akwụkwọ 2000 nọchitere mba 64” na-anọchi anya netwọọdụ Betel ọzọ maka ịga n’ihu NAR, ịbụ “ezubere iji mepụta ndị gụsịrị akwụkwọ bụ ndị jupụtara n'ịhụnanya, iguzosi ike n'ezi ihe , obi ike na nsọpụrụ ma nwee ike ije ije na ike karịrị mmụọ nke Mmụọ Nsọ ”(Betel Redding School of Supernatural Ministries 2013)
John na Carol Arnott bụ ndị ozuzu aturu nke otu obere osisi ụka a maara dị ka Ugbo Ugbo nke Toronto mgbe ọfụma mmalite nke Ngọzi Ngọzi Toronto bidoro na Jenụwarị 1994. Ruo ihe karịrị afọ iri, mbugharị na nzukọ na-aga n’ihu wetara ndị njem ala nsọ si n’akụkụ ụwa niile ka ha nụrụ ụtọ “ Ngọzi Toronto ”(Poloma 2003; Steingard 2014; Wilkinson and Althouse 2014). Mgbe John Wimber chụpụrụ ya na Association of Vineyard Churches na 1996, a gbanwere aha chọọchị ahụ na Toronto Airport Christian Fellowship na n'ikpeazụ wee jide Fire. A kọwawo ụgbụ a dịka ndị a: "Catch The Fire bụ ezinụlọ nke ụka na ministri n'ụwa niile, nke a dara n'ihi nsụgharị ahụ dị egwu malitere na Toronto na 1994. Taa, Catch the Fire gụnyere ọtụtụ ụlọ ụka na-eto eto, a mahadum na withlọ Akwụkwọ International nke Ozi, mmemme mmemme na ihe omume na - aga gburugburu ụwa. ” Na 2006, John na Carol Arnott tụgharịrị ụkọchukwu ọgbakọ nke nwere “ọtụtụ ogige n'ofe mpaghara Greater Toronto" gaa ndị ha na ha rụkọrọ ọrụ ogologo oge Steve na Sandra Long. Valueskpụrụ isi nke ọgbakọ "na-anụ olu Chineke, ọgwụgwọ na-agwọ ọrịa, ịhụnanya Nna, na ịbụ onye e nyere ike na Mmụọ Nsọ" (Catch the Fire website 2011). A maara netwọk ụwa nke ọkụ ọkụ ụka a na-akpọ Partners in Harvest; ụka ndị na-achọghị ịhapụ ụka ụka nwere ike isonye na netwọkụ amara dị ka Enyi na Owuwe Ihe ubi (Partners in Harvest website nd).
Randy Clark, onye ụkọchukwu Ubi Vineyard na St. Louis, Missouri, ka a maara dị ka onye ozi nke bidoro ngọzi Toronto mgbe John Arnott kpọrọ ya ka ọ kwusa ozi ọma na Vineyard Airport nke Toronto na Jenụwarị 20, 1994. Chọọchị Toronto nọ na-ekpe ekpere maka mmaliteghachi mgbe Clark, onye natara ikike ime mmụọ n'oge na-adịbeghị anya site na ozi nke Rodney Howard-Browne (River Minista International website 2016), jeere ụfọdụ ndị otu ụka 120 nke ụka Arnott ozi na Jenụwarị 24, 1994. Ihe ngosipụta pụtara ìhè nke ngosipụta jupụtara na obere ụka. . Ọtụtụ ndị ozi dị iche iche kachasị na Canada, United States na United Kingdom, ga-ekwusa ma jee ozi n'oge ọrụ mmeghari abalị na Toronto maka ihe karịrị afọ iri na Clark na-alaghachikwuru onye ụkọchukwu ụka Vineyard ya na St. Ọ bụ ezie na ọ na-aga eleta Toronto ugboro ugboro, n'oge na-adịghị anya Clark malitere ịmalite ozi na-agwọ ọrịa na ntanetị na ntanetị. A kọwawo ya n'ụzọ dị nkenke dị ka "onye ụkọchukwu obodo nta na 1980 mgbe John Wimber kwuru okwu amụma banyere ya na-ebu amụma na ozi ya ga-enyere ndị mmadụ aka n'ụwa niile inweta ike karịrị nke Chineke" (Sparks na Anderson, 2015: 21). Randy na nwunye ya DeAnne guzobere netwọkụ nọọrọ onwe ya nke akpọrọ Apostolic Network of Global Awakening (ANGA), nke akọwara dịka "ozi nkuzi, ọgwụgwọ na inye mmadụ n'obi na mba dị iche iche." Clark nwetara doctorate si United Theological Seminary na Dayton, Ohio ebe ọ nyochara uru nke ekpere ọgwụgwọ dịka isiokwu edemede ya (Sparks and Anderson 2015). Ndị ọrụ ANGA na-aga n'ihu na-elekwasị anya na ọgwụgwọ na izi ozi ọma, gụnyere njem njem mba ụwa, ọgwụgwọ na nzukọ amụma, ụlọ akwụkwọ nke na-azụ ma na-agbalite ọgwụgwọ Chineke, yana nkuzi na Wagner Leadership Institute's online campus (Global Awakening website 2015).
Che Ahn na nwunye ya Sue malitere na Harvest Rock Church na Pasadena, California (nke a maara ugbu a dị ka HRock Church) mgbe ọ nwetara mmetụ nke revival na John Wimber's Anaheim Vineyard Church dị na ndịda California. Mgbe njem gachara na Vineyard Airport nke Toronto, nlọghachi malitere na chọọchị Pasadena na 1994, n'oge na-adịghị anya ọgbakọ malitere ịbịa nzukọ nzukọ abalị na nzukọ mmalite na California West West. Ahn bụụrụ nwa akwụkwọ nke C. Peter Wagner, na-enweta nna ya ukwu na doctoral degrees na Fuller Theological Seminary. Ọ malitere ọrụ na Wagner Leadership Organisation nke Wagner hiwere na 1998 iji nye "ọzụzụ na ozi bara uru" ma na-ekwe nkwa "ndụ, na-arụ ọrụ na mbido site na Mmụọ Nsọ iji na-eje ije na akara aka Chineke ha" (Wagner Leadership Institute 2015). Ahn bụkwa onye isi oche nke Oku ahụ, netwọk ekpere ndị ntorobịa tọrọ ntọala yana onye isi ụkọchukwu ya na onye amụma mbụ ya bụ Lou Engle. Ahn eguzobekwala njikọ zuru ụwa ọnụ dị ka onye nchoputa na onye isi ala nke Harvest International Ministry, “njikọ nke ndịozi n'ụwa niile nke karịrị ụka 5,000 n'ihe karịrị mba iri atọ na ise nwere otu echiche 'Changing Lives, Transforming Cities, and Discipling Nations (HRock Church websaịtị 2016).
Georgian na Winnie Banov bụ ndị guzobere Ememe Global, ha na-agagharịkwa na-eduzi nzukọ nzukọ na nzukọ ụwa niile. Georgian, onye egwu egwu nke gbapụrụ Bulgaria na 1970s, gara California, ebe onye na-ekweghị na Chineke ghọrọ onye ntụgharị. Ọ bụ mgbe ya na ndị Jesus na Georgian na-ekwu na "e mere ya baptism na Mmụọ Nsọ na ọkụ" (Global Celebration website 2016). A pụrụ ịhụ ọdịdị zuru ụwa ọnụ nke Ememe Global na nkọwa e nyere maka ozi ha: “e nwere ọtụtụ ụmụ mgbei ugbu a n'okpuru nlekọta Banovs na Nicaragua na India, gbakwunyere Global Celebration ise nkwado ụlọ ọrụ nnapụta ụmụaka na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia (Burma, Thailand na Kambodia) Ha anabatakwala klas nke mbụ (ụmụ akwụkwọ 200) na Mozambique ma kpebisie ike ịkwụ ụgwọ maka nri, agụmakwụkwọ, uwe ụlọ akwụkwọ na ihe niile ha gafere ruo klas nke iri na abụọ. Napụta onye ahụ na-akwado ndị mmekọ na ndị enyi na-agbapụta ụmụaka n'aka ịgba akwụna ụlọ nsọ na India, yana site na ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmekọahụ na Thailand na Philippines, na ndị ahịa ọgwụ ọjọọ na Mexico "(Global Celebration website 2016).
Rolland na Heidi Baker malitere Iris Minista, Inc. (nke bụ Iris Global ugbu a) n’afọ 1980. Ha ejewo ozi dị ka ndị ozi ala ọzọ na Asia, England, na ugbu a Mozambique ihe karịrị afọ 25, mana ọ bụ Ngọzi Toronto bụ nke mere ka ha banye n’otu mba ụwa. Dị ka ndị ozi ala ọzọ gbara ọkụ na Mozambique n'etiti 1990, ha enweghị obere ihe ha gosipụtara maka ọrụ ozi ala ọzọ ọhụrụ ha na Africa. Rolland ga-abụ onye izizi gara Toronto maka izu ike mmụọ; Heidi ga-agbaso ma nweta amụma na ike karịa ihe ọ tụrụ anya ya. Randy Clark nọ na-eje ozi na mmaliteghachi Toronto n'oge nleta mbụ nke Heidi na (na-ezutebeghị ya mbụ) o kwupụtara n'ụzọ amụma, sị: “Ndị ìsì ga-ahụ ụzọ. Ndị ngwọrọ ga-aga ije. Ndị ntị chiri ga-anụ ihe. A ga-akpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ, ndị ogbenye ga-anụkwa ozi ọma ahụ. ” Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ amụma Clark ga-enye ya nke buru ụzọ kwuo na Iris Global ga-enwe ọganiihu. Nleta Rolland na Heidi na Toronto yiri ka ha nyere di na nwunye ahụ ike na inye nkwado ka ha na-ele anya na mbido azụ ha na Mozambique tozuru oke wee jee ozi mba ụwa (Poloma na Lee 2013b). Iris Global kọrọ na ịmalite ọtụtụ puku chọọchị n'Africa ma lekọta ọtụtụ iri puku ụmụ mgbei, gụnyere “ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ ndị dị na Bible, obere ụlọ ọrụ na ọrụ ihe owuwu.” Ọ bụ ezie na ozi ahụ malitere na Mozambique, Iris Global dị ugbu a na "karịa mba 30 ọzọ, gụnyere Sudan, Brazil na India" (Soars, 2016: 20). Ugbu a nwere ihe karịrị iri atọ na ise na mba iri abụọ nke ndị ozi ala ọzọ na ndị isi obodo na-eduzi (2016 Global website nke Iris).
Inye nkọwa di iche iche nke Revival Alliance na ụfọdụ n'ime netwọk njikọ ya nwere ike inye nanị obere foto na-ele anya nke arụ ọrụ zuru ụwa ọnụ nke a maara dị ka New Apostolic Reformation. Nzukọ na ngalaba ndị a haziri ahazi na-anọgide na-agbapụ dị ka netwọk nke mmiri na-ejikọta ha. Na hel nke NAR bụ ndị isi na ndị na-eso ụzọ na-ekwenye na ha na-anụ ma nata Chineke. Na isi ya bụ ihe ọzọ na-ahụ maka ebube nke ụwa nke na-ekwusi ike inweta ọnụnọ Chineke na ike nke Mmụọ Nsọ bụ Kraịst nkịtị.
O doro anya na etiti iri na akara akara nke NAR bụ ihe a chọrọ iji weghachite ụlọ ọrụ chọọchị dị iche iche nke "ndịozi" na "ndị amụma" iji kwado ndị ọrụ nlekọta, ndị nkụzi, na ndị na-ezisa ozi ọma. Dị ka anyị kwurula, NAR na-akwado mweghachi nke ihe a sịrị na ọ bụ "ozi ise" mbụ nke ụka oge ochie, gụnyere ọchịchị gọọmentị nke ndịozi na-arụ ọrụ na ndị amụma ya iji chịkwaa chọọchị ahụ. Site na nduzi ndi Apostol kwesiri ntukwasi-obi na n'usoro, o kwenyere na o kwere omume igbanwe "ugwu ugwu asa" (akwukwo, ochichi, mgbasa ozi, oru na ntụrụndụ, okpukpe na ezinulo) na ime ka ala eze Chineke nelu uwa.
Na nyochaa ezigbo ọchịchị na nsogbu ndị ọzọ na-eche NAR ihu, ekwesiri ịkpa oke nke netwọkụ ya. Ọ bụ C. Peter Wagner mepụtara moniker na nkọwa nke NAR ma nwee ike ịtụgharị uche karịa njirimara Wagner na njem ahụ karịa ihe na-agagharị n'ụwa niile. Wagner nwere ike ịnọ ebe ọ na - ekwu na Iso globalzọ Kraịst zuru ụwa ọnụ na - enwe mgbanwe dị ukwuu, mana ezigbo ngbanwe nwere ike ịchọta na uto nke Pentikọstal ọdịbendị dịgasị iche iche nke na - ekwu maka ndị na - eso ụzọ 600,000,000 gburugburu ụwa ma na-agụta. Mweghachi nke ọrụ ndị amụma na nke onyeozi nwere ike ịbụ nnukwu onye na-eto eto na uto a dịka Wagner tụrụ aro; N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ndị a gbakee nwere ike igosipụta mana otu n'ime ọtụtụ akara esemokwu nke Pentikọstal nke North America dị ọhụrụ. Ọ ga - ekwe omume na ngbanwe ọhụrụ ahụ ka akọwapụtara nke ọma dị ka ngbanwe nke echiche ụwa banyere okpukpe sitere na nkuzi kachasị na Enlightenment gaa na ahụmịhe okpukpe nke na-abụghị Ọmụma banyere ihe ịrịba ama na ọrụ ebube? Ọ ga - abụ na echiche ụwa abụọ na - anabata nkwenkwe Ndị Kraịst bụ isi na ahụmịhe nke okpukpe bụ na isi nke mgbanwe ọhụrụ. O kwere omume na mgbanwe Wagner akpọwo NAR ma ọ bụ enweghị mweghachi nke ndịozi na ndị amụma.
Ndị nkatọ nakweere dị ka eziokwu nke Wagner banyere ọrụ nke ndịozi na ndị amụma nke oge a na NAR, na enweghị obere ihe akaebe na nkà mmụta okpukpe a dị mkpa na ndụ ndị na-eso ụzọ. O yikarịrị ka ndị Pentikọst ole na ole maara banyere NAR, esemokwu ọ kpatara ma ọ bụ njirimara C. Peter Wager. Wagner ajụwo ọrụ ọ bụla na ntọala NAR, mana o tinyela isi na ịkọwa ya. Ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ na-aza ma nkọwa ahụ ọ dabara na eziokwu.
Nkà mmụta okpukpe Wagner banyere ọchịchị ụka kwesịrị ekwesị abụrụla isiokwu nke nyocha akwụkwọ nsọ ma chọọ ọtụtụ ndị Evangelicals. Dịka ọmụmaatụ, Geivett na Pivec (2014) na-ewetara nlezianya nyocha banyere nkuzi NAR banyere ndịozi nke oge a, wee gaa n'ihu na-akatọ ya. Dika nghota ha nwere banyere ndi ozi no na chochi mbu, apuru ichota ndi ozi ato (ndi ozi iri na abua nke Jisos, Pol dika onye ozi mgbe Jisos gasiri, na ndi ozi ndi ozo edeputara na agba ohu ndi neje ozi di iche iche), na ha na-ekwu na mweghachi nke NAR nke ndị amụma na ndịozi abụghị nke Akwụkwọ Nsọ. N'adịghị ka Wagner, Geivett na Pivec kwubiri na ọrụ ndịozi nke oge a dị ka isi nkuku nke ikike na ụka nke oge a enweghị ihe ndabere Akwụkwọ Nsọ:
Akwụkwọ Nsọ na-egosi na ndị ozi nke Kraịst — gụnyere mmadụ iri na abụọ ahụ, Pọl, na ndịozi ndị ọzọ ahụ Kraịst pụtara n’ihu ma họpụta ọrụ pụrụ iche mgbe a kpọlitere ya n’ọnwụ — anaghị aga n’ihu taa. Ndịozi ndị ọzọ - ndịozi nke ụka - nwere ọrụ na-aga n'ihu, mana ha anaghị achịkwa. Ọrụ ha yiri nke ndị ozi ala ọzọ taa na ndị na-akụ ụka. Ebe ọ bụ na ihe akaebe Akwụkwọ Nsọ na-egosi na ọfịs ọchịchị gọọmentị Agba Ọhụrụ adịghịzi, ndị isi NAR ndị na-azọrọ na ha nwere ọfịs a ga-ebu ụzọ gosi na ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu. Nke a ha emeghị (Geivett na Pivec 2014: 84).
Ma enweghi ihe ngbawa nke oma na ndi n'ejuputa uka NAR na-aduta site na nkwarita uka ma o bu na mmegha ndi amuma ndi amuma bu ndi ozizi nke ndi Pentikostal.
Ndị amụma nke 1980s nwetakwara nkatọ na ndụmọdụ tupu mbata ndịozi na ọnọdụ n'etiti 1990s. Dịka ọmụmaatụ, John Wimber, onye guzobere Association nke Ubi Vineyard, bịara na kọntaktị nke ndị amụma a maara dị ka Kansas City Amụma na njedebe 1980s. A pụrụ ịkọwa ahụmahụ ya na amụma ahụ dị ka "agwakọtara;" ụfọdụ amụma 'amụma' ahụ yiri ka ọ ga-emezu ebe amụma ndị ọzọ enyere ya emezubeghị. Mgbe otu n'ime ndị amụma (Mike Bickle) rịọrọ ka weta ụka ya n'ime AVC, Wimber wepụtara nkwupụta nke njehie tupu ịbanye. "Njehie" ndị a gụnyere nchegbu Wimber banyere "enweghị ike ịza ajụjụ maka amụma, na-enye ndị amụma amụma ohere ịkụziri ndị na-enweghị onyinye ịme ya; mgbalị ụfọdụ ndị amụma na-anwa ime ka ozizi dabere n’amụma; nkwenye siri ike na nnyefe nke okwu amụma ”(Jackson 1999: 219). Ndị nkatọ, ọbụlagodi ndị megheere onyinye nke amụma dị ka ndị Pentikọst nke ebili mmiri atọ a na-eme ogologo oge, emeela oku yiri nke ahụ maka nlekọta amụma na nghọta nke na-adịghị ike ma ọ bụ enweghị na NAR.
A na-ahụ nchegbu ndị yiri ya na oku maka nghọta na nkatọ nke usoro mmeghari nke atọ, gụnyere ndị nke Ngọzi Toronto. Criticfọdụ nkatọ dị oke ma bụrụ ihe na-enweghị isi, gụnyere ọtụtụ ndị edepụtara na Hank Hanegraaf's (1997) Ntughari Mgbochi ma kwue okwu banyere ọkà mmụta okpukpe James A. Beverley (1997) banyere akwụkwọ Hanegraaf. Ndị nkatọ ndị ọzọ egosiputa ngosipụta anụ ahụ nke bụ ụghalaahịa na-ese okwu nke Ngọzi Toronto dị ka "mmụọ ụgha na-awakpo ụka" nke yiri ngosipụta Hindu / New Age (Kudalini). Andrew Storm (2007: 6), onye kowara na ya bu “onye juputara na Mo Nso, onye nekwu okwu n’asusu di iche,” weputara “Kundalini ịdọ aka na ntị” maka ihe ọ huru dika mbughachi akarị na inyocha ihe ọ na-ahụta dika “ezi na okwu ụgha” mmalite ( Oké ifufe 2008).
Eleghi anya karịa ihe ọ bụla ọzọ mere, Lakeland Outpouring na Ignited Church dị na Lakeland, Florida dị na 2008 gosipụtara nchegbu na-arịwanye elu maka ndị ndú ụka na ndị mkpọkọta banyere ọrụ nke ndịozi na ndị amụma nọ na chọọchị oge a. Todd Bentley, bụ onye na-ekwusa ozi ọma na 32 dị afọ iri na isii nke Canada, na ọtụtụ nkwụsị na ọtụtụ nkedo ihu ihu bụ onye na-ese okwu na-eduzi nchịkwa. Ihe omume ya na ihe omimi ya mere ka ihe karịrị atụmanya maka mmalite. Okwusa ozi ọma ya na-apụ-na-eme ka ọtụtụ ndị (na-eti mkpu okwu dị ka "bam, kaboom boom" ka o setịrị aka ya iji gwọọ), nakwa ihe yiri ka ọ bụ mwakpo anụ ahụ na ụfọdụ na-abịa maka ekpere n'oge ememe ahụike. Ma ọtụtụ iri puku ndị pilgrim rutere Lakeland n'oge ọnwa anọ nke mbubreyo oge utọ na n'oge okpomọkụ ka ha gaa nzukọ nlọghachi nke abalị mgbe ọtụtụ narị puku ndị ọzọ na-ekiri mgbasa ozi abalị nke ntanghachi na TV nke Chineke.
Ọnwa atọ ka mweghachi ahụ nwere emume pụrụ iche nke onyeozi C. Peter Wagner duziri ma ndị ọrụ Revival Alliance Che Ahn, Bill Johnson, na John Arnott na-akwado ya, na-enye Bentley ọrụ dị ka onye nkwusa ozioma. Geivett na Pivec (2014: 210) kọwara ọrụ Bentley dị ka ndị a:
N'oge emume a, Wagner kpọrọ Ahn, Johnson, na Arnott dịka "ndịozi apostolic nke ụka taa." O jikwa ọrụ ha nyere Bentley tụnyere ihe ndị yiri ya n'akwụkwọ Ọrụ Ndịozi, mgbe ndịozi atọ - Jems, Sifas, na Jọn - matịrị aka nri nke mkpakọrịta nke Pọl na Barnabus. Wagner kwuru na "ọrụ ahụ na-anọchite anya azụmahịa dị ike na-eme n'ụwa a na-adịghị ahụ anya," wee kwuo, sị: "Ana m ewere ikike ndịozi nke Chineke nyere m, m na-enyekwara Todd Bentley iwu: ike gị ga-abawanye. Ikike gi ga-abawanye. Obi ebere gị ga-aba ụba. Mmetụta gị ga-abawanye. Nkpughe gị ga-amụba. E nyekwara m iwu na ike ọhụrụ karịrị nke mmadụ ga-aga n'ozi a [Lakeland Revival].
N'August 2008, Bentley tụbara bọmbụ nke mere ka ọ dịghachi nso ngwa ngwa ọnwa anọ ka ọmalitere. Bentley kwupụtara na ya nọ na-ahapụ nwunye ya na ụmụ ya ka ha lụọ otu onye ọrụ nwanyị na-eme njem. Site na "mmebi iwu omume" ya ọha mmadụ, mmalite nke Lakeland bịara na mberede. Ọ bụ ezie na Bill Johnson nyere onye nkụzi Bentley ndụmọdụ site na oge mweghachi, Bentley tụgharịrị na Rick Joyner, onye amụma amụma nke MorningStar Ministri na Fort Mill, South Carolina maka nduzi. Bentley's Fresh Fire Minista amaliteghachiri na Fort Mill dị ka isi maka ọzụzụ na ịmalite ozi mba ụwa. Bentley dere n'oge na-adịbeghị anya (Fresh Fire website 2016):
Ọnwa ikpeazụ nke 3 nke ihu ọma Chineke na amara maka Jessa na m, na FFM natara n'aka Onyenwe anyị abụwo ihe ịtụnanya. Enwere ike ịgbanwe ya ka anyị na-ezisa oge nleta ọhụụ, ihu ọma na ihe nrite maka ndị ọzọ. Anyị na-ekpe ekpere na ọ ga-abụ ọnụ ụzọ abụọ meghere ọnụ maka oge gị.
Ọ bụ ezie na esemokwu nke ndị nkatọ NAR welitere na-ejedebe na nkwenkwe ụka na omume okpukpe, otu ihe merenụ emeela ka NAR gaa na mgbasa ozi mgbasa ozi ụwa. N’afọ 2009, ndị nkwusa abụọ kpọrọ onwe ha leta Rick Perry, onye bụbu gọvanọ na Texas, onye nta akụkọ nyochara akụkọ a ma bipụta ya n’afọ 2011. Usoro mgbasa ozi ya gụrụ: Ndị Kraịst na-emebiga ihe ókè na ndị kpọrọ onwe ha ndị amụma chọrọ ịmaba n'ọchịchị, Rick Perry nwekwara ike ịbụ nwoke ha. ” Ndị amụma ahụ bụ ndị ụkọchukwu Texas abụọ nke obere ọgbakọ ndị ha na Perry kpere ekpere ma buo amụma banyere atụmatụ Chineke maka Texas: “Otu amụma siri ike kwupụtara na Texas bụ 'Onye Amụma ahụ,' nke Chineke tere mmanụ iduga United States na mmalite na ọchịchị Chineke. . Gọvanọ ahụ ga-arụ ọrụ pụrụ iche ”(Wilder 2011). Kọrọ na arịrịọ ya, ndị ozuzu aturu ahụ soro Perry kpee ekpere (“ka isi ha hulatara n’ihu ihe osise nke Agha nke Alamo”). Ha mechiri ekpere ahụ site na nkwupụta amụma na Perry nwere onye ndu karịrị Texas na "Texas nwere ọrụ karịrị ihe ndị mmadụ ghọtara."
Amụma nwere ike ịda ma ndị ọrịa nwere ike ịnwụ, mana okwukwe nke Pentikọst n'ụwa nile na-aga n'ihu na-egosipụta echiche "ụwa karịrị nke" ọzọ na-eme ememme ndị na-efe ofufe na-akpọsa na Chineke dị ndụ ma na-arụsi ọrụ ike na ndụ ụbọchị niile nke ụmụ mmadụ. Ọ bụ ezie na ndị òtù okpukpe Pentikọstal ("ebili mbụ") nwere ike ịdị na-aga n'okporo ụzọ dị iche iche na-eme ka ndị mmadụ nweta ụwa ọhụrụ (Poloma 1989), ihe nke atọ na-aga n'ihu. iji nọgide na-abịa na-emeziwanye okwukwe nke ahụmahụ ndị ụka NAR na netwọk na-akwalite. Agbanwe ohuru zuru ụwa ọnụ nke Iso Ụzọ Kraịst nwere ike ịmalite, mana mgbanwe a yiri ka ọ dị mgbagwoju anya karịa NAR na-akụzi ihe banyere ndịozi na ọchịchị chọọchị.
Image #1: Foto nke C. Peter Wagner, onye prọfesọ Ụlọ Akwụkwọ Na-amụ Ihe n'Ụlọ Akwụkwọ Fuller lara ezumike nká na onye isi oche nke ụlọ ọrụ ndị nduzi Wagner.
Foto # 2: Foto nke John Wimber, onye duuru Association of Vineyard Churches, nke toro na ụlọ ụka Vineyard nke Ken Gulliksen.
Image #3: Foto nke otu ọrụ na Vineyard Na-ahụ Maka Ụgbọ Mmiri Toronto.
Image #4: Foto nke "ugwu asaa nke ọdịbendị" nke nkà mmụta okpukpe NAR.
Albrecht, Daniel E. 1999. Ntughari n'ime Mmụọ. Akwukwo nso na Pentikostal / Ime ihe ike. Sheffield: Ụlọ akwụkwọ Pịa.
Ụlọ ọrụ Redding nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ịnya Anwansi. Nweta site na www.bssm.net na 29 July 2016.
Beverley, James A. 1995. Nsọ Ọchị & Ngọzi Toronto. Nkwupụta nyocha. Rap Rapids, MI: Zondervan Publishing House.
Beverley, James A. 1997. Agha Ntughari. A Critique of Counterfeit Revival. Toronto: Ndị Ozi Ọchịchị Oziọma.
Chọta ebe nrụọrụ Fire. Nweta site na http://www.catchthefire.com/ na 15 July 2016).
Dedon, Kevin. 2007. Ego kachasị mma. Shippensburg, PA: Ndị na-ebipụta ihe na-ebibi ihe:
Di Sabatino, David. 1999. Okpukpe ndị Jizọs: Akwukwo akwukwo di iche iche na akwukwo ozo. Westport, CT: Greenwood Press.
Geivett, R. Douglas na Holly Pivec. 2014. Ndozigharị Ọhụrụ nke Apostolic? Nzaghachi Buiblical na Òkè zuru ụwa ọnụ. Wooster, OH: Weaver Books.
Ebe nrụọrụ weebụ Awakening Global. 2015. Nweta site na https://globalawakening.com/network na 15 July 2016).
Mkpokọta Gbasara Ememe Global. 2016. Nweta site na http://globalcelebration.com/ na 15 July 2016.
Global Legacy website. 2016. Nweta site na http://globallegacy.com/ na 29 July 2016.
Hamon, Bill. 1997. Ndị amụma Ndịozi na Nke Chineke Na-abịanụ. Atụmatụ maka oge ikpe-azụ nke Chineke maka Nzukọ-nsọ ​​Ya na ụwa a. Santa Rosa Beach, FL: Christian International.
Hanegraaff, Hank. 1997. Ntughari Mgbochi. Thomas Nelson nkwusa.
Healing Room Ministries website. 2016. Nweta site na http://healingrooms.com na 2 August 2016.
Chọọchị HRock. 2016. Nweta site na http://hrockchurch.com na 15 July 2016.
Ingalls, Monique M. 2015. "Okwu: Interconnection, Interface, and Identification in Pentecostal-Music and Worship Charismatic." Pp. 1-25 na Mmụọ nke Otuto, dezie Monique M. Ingalls na Amos Yong. Mahadum State: Pennsylvania State University Press.
Ebe nrụọrụ weebụ Global Iris. 2016. Nweta site na http://www:irisglobal.org/about, na 15 July2016).
Jackson, Bill. 1999. Nchọgharị nke Middle Radical Middle. A History of the Vineyard. Cape Town, South Africa: Ubi-vine International Publishing.
Jesus Culture website. 2016. Nweta site na http://jesusculture.com na 1 August 2016.
Johnson, Bill. 2005. Ike Ike nke Mgbanwe Agbanwe: Ịnweta Ndụ nke Ọrụ Ebube. Shippensburg, PA: Ndị na-ebipụta mbipụta.
Johnson, Bill. 2003. Mgbe Eluigwe Na-abata n'Ụwa. Nduzi Bara Uru Maka Ndụ nke Ọrụ Ebube. Shippensburg, PA: Ndị na-ebipụta mbipụta.
Kay, William K. 2007. Ndị Apostolic Networks na Britain. Ụzọ Ọhụụ Ọhụrụ. Milton Keynes, United Kingdom: Paternoster.
Liebscher, Banning. 2009. Jesus Culture. Ibi Ndụ nke Na-agbanwe Ụwa. Shippensburg, PA: Ndị na-ebipụta mbipụta.
Lindhardt, Martin, dere. 2011. Na-eme Okwukwe. Ndụ Ritual nke Pentikọstal-Ndị Kraịst na-eme ihe ike. New York: Akwụkwọ Berghahn.
Miller, Donald E. 1997. Ịghaghachi Protestant America: Iso Ụzọ Kraịst na Narị Afọ Iri Ọhụrụ. Berkeley: Mahadum California Press.
Ndi ulo oru ubi n'ubi Harvest. nweta nnweta site na https://www.partnersinharvest.org/ na 15 July 2016.
Poloma, Margaret M. 2003. Main Street Mystics: Ngọzi na Toronto & Rekpọlite ​​Pentikọstal. Owuwu Creek, CA: Alta Mira Press.
Poloma, Margaret M. 1995. "Charisma, Nhazi na Mgbanwe Ọha na Ahụhụ." Pneuma: The Journal of Society for Pentecostal Studies 17: 245-53.
Poloma, Margaret. 1989. Ihe Nkume nke Chineke n'osimiri. Charisma na Dilemmas usoro. Knoxville: Mahadum nke Tennessee Press.
Poloma, Margaret. 1982 Òtù Na-ahụ Maka Ọchịchị Na-agagharị: È Nwere Pentikọst Ọhụrụ? " : Boston: Twayne Publishers
Poloma, Margaret M. na Matthew T. Lee. 2013a. "Ndozigharị Ọhụrụ nke Apostolic: Isi akwụkwọ Mystics na Ndị Amụma Ọ bụla." Pp. 75-88 na Amụma n'Achị Narị Afọ Iri ahụ: Mgbe Amụma Dịrị , nke Sarah Harvey na Suzanne Newcome dere. Farnham, United Kingdome: Ashgate Publishing.
Poloma, Margaret M. na Matthew T. Lee. 2013b. "Amụma, Ịma Ike, na Ịhụnanya Chineke: Ihe Nkume nke Mmụọ na Ọganihu nke Pentikọstal." Pp. 277-96 na Mmụọ na Ike: Ọganihu na Mmetụta Nile nke Pentikọstism , nke Donald E. Miller dere, Richard Flory na Kimon Sargeant. New York: Oxford University Press.
Osimiri Ministri International website. 2016. Nweta site na http://www.revival.com/ na 2 August 2016.
Robuck, Cecil M., Jr. 2006. Azusa Street Mission and Revival: Ọmụmụ nke Nzukọ Pentikọstal nke zuru ụwa ọnụ. Nashville, TN: Thomas Nelson.
Robuck, Cecil M., Jr. 2002. "Onyinye nke Amụma," Pp. 1000-10 na The New International Dictionary of Pentikọstal Charmsatic Movements, edeziri site na SM Burgess na EM Van Der Maas. Rap Rapids, MI: Zondervan.
Soars, Cassandra. 2016. "Heidi Baker: Ịhụnanya dịka ọkụ." Lake Mary, FL Charisma House.
Sparks, Larry na Troy Anderson. 2015. "Onye Na-ekwusa Ozi Ọma Na-agwọ Ọrịa." Charisma , March. Nweta site na http://www.charismamag.com/spirit/supernatural/22492-the-healing-miracles-preacher na 28 July 2016.
Steingard, Jerry na John Arnott. 2014. Site n'ebe a gaa mba. Akụkọ nke Ngọzi Toronto. Toronto: Nweta akwụkwọ ọkụ.
Strom, Andrew. 2007. Ihe mere m ji hapụ ọrụ amuma. Ụlọ akwụkwọ Revival. www.revivalschool.com .
Strom, Andrew. 2008. Eziokwu na Falghaghachi. Ụlọ akwụkwọ Revival. www.revivalschool.com .
Ụlọ ọrụ Institute nke Onye Ọchịchị Wagner. 2015. Nweta site na wagnerleadership.org na 15 July 2016.
Wagner, C. Peter. 2011. "Ndozigharị Ọhụrụ nke Apostolic abụghị Ọhụụ." Nweta ya www.charismanews.com/opinion/31851-the-new-apostolic-reformation-is-not-a-cult na 15 April 2016.
Wagner, C. Peter. 2002. "Azụ nke Atọ." Pp. 11-41 na The New International Dictionary of Pentecostal Charlosatic Movements , nke SM Burgess na EM Van Der Mass na-edezi. Grand Rapids, MI: Zondervan.
Wagner, C. Peter. 1997. "C. Peter Wagner na-aga n'ihu." Pp . xxi-xxiii na Ndịozi, Ndị Amụma na Ọbịbịa Na-abịanụ nke Chineke. Santa Rosa Beach, FL: Christian International.
Wilder, Forrest. Julaị 13, 2011. "Rick Perry si Army nke Chineke." Ndị Texas Observer. Nweta site na http:// www.texasobserver.org/rick-perrys-army-of-god/ na 5 August 2016.
Wilkinson, Michael na Peter Althouse. 2014. Chọpụta ọkụ. Ekpere na-ekpo ọkụ ma na-agba ume. DeKalb, IL: Ngalaba Ụlọ Akwụkwọ University nke Northern Illinois.
Prince Philip, Duke nke Edinburg